Manorina trano eo ambony vatolampy sa eo ambony fasika?
"Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany ; nefa tsy nianjera izy, satria efa naorina teo ambonin’ny vatolampy." Matio 7:25
"Fa aoka ho mpankatò ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo." Jakoba 1:22
Fanoharana vitsivitsy; Matio 7:24-27
Famintinana: Indreo misy trano roa: ny iray naorina teo ambony vatolampy, ny iray teo ambony fasika. Tonga anefa ny tafiotra… Ilay voalohany tsy naninona, fa ilay faharoa kosa nirodana!
Heviny: Ny tafiotra dia maneho ny fisedrana sy zava-manahirana eo amin’ny fiainana. Ny trano miorina eo ambony vatolampy dia kisarisarin’ny olona izay nandray ny fampianaran’i Jesosy sy nampihatra izany. Ny trano miorina eo ambony fasika dia maneho olona nahare ihany koa, kanefa tsy nankatò.
Fampiharana: Ireo trano roa ireo dia mitovy ihany, ety ivelany. Fa mba jereo ange ny fototr’izy ireo! Ho an’ilay voalohany dia nihady lalina ny mpanao trano (Lioka 6:48) ka nanorina azy teo ambony vatolampy, vatolampy maneho an’i Jesosy mihitsy, Jesosy Izay henointsika am-pinoana. Ilay faharoa kosa dia eo ambony “fasiky” ny fihevitr’olombelona sy kajikajiny ihany no miorina, fa tsy eo amin’ny tenin’Andriamanitra. Mandra-pahatongan’ny zava-tsarotra misedra ny hamafin’ny trano, dia tsy hita izay maha samy hafa azy ireo. Fa taorianan’izany kosa, dia loza no nanjo ilay trano naorina teo ambony fasika!
Ny fasika dia toa mahazaka fanorenana ihany, saingy fepetra iray no takiana: tsy tokony hisy rano mikoriana. Ny riaka mihitsy no naharava ilay trano faharoa: toa trano tsara orina ihany, raha jerena ivelany, kanjo rehefa nitranga ny tafiotra dia nipaoka azy.
Mety hahafantatra ny tenin’i Jesosy ihany isika, na hahatakatra izany mihitsy aza, kanefa ve mampihatra? Tena tapa-kevitra ve isika hanatanteraka izay lazain’i Jesosy? Raha izay isika, dia ho ilay lehilahy “manan-tsaina”, izay manorina ny fiainany eo ambony vatolampy.